Dhiilo laga muujiyay dad soogalooti ah oo ku dhintay Giriigga - BBC Somali
Image caption Soogalootiga ayaa ka mudaaharaaday dhimashadan u dambaysay
Hay'addaha gargaarka ayaa dhiilo ka muujiyay saddex ruux oo qaxooti ah oo todobaad gudahii ugu dhintay jasiiradda Lesbos.
Waxay sheegeen in xaaladda xun ee ka taagan xerada Moria ay sababtay "halis dhab ah" oo soo wajahday ugu yaraaan 3,000 oo soo galooti ah oo ku nool halkaas.
Wiil da'da labaatameeyada ku jira oo la sheegay in uu Bakistaani yahay ayaa isaga oo mayd ah laga helay teendhadii uu daganaa Isniintii.
Wiil 22 jir ah Masar u dhashay iyo 46 jir Suuriyaan ah oo isku teendho daganaa ayaa dhintay todobaadkii hore. Warbixinada qaar waxay tilmaamayaan in ay ku neefqabatoobeen qiiq sumaysan oo ka soo baxay kulayliyeyaasha.
Booliiska dalka Giriigga ayaa hadda baaraya dhimashadaas.
Warbaaahinta Giriiggu waxay ku warantay in qaxootigu ay ku sumoobeen waxyaabaha ay shidanayaan maadaama oo qabawga xad-dhaafka ah uu ku qasbay in ay wax uun shitaan si ay diirimaad uga helaan.
Panos Navrozidis oo ah madaxa hay'adda IRC ee dalka giriiga ayaa sheegay in aan loo dulqaadan karin dhimashadan foosha xun, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
In kabadan 60,000 oo ruux oo soo galooti iyo qaxooti isugu jira ayaa ku nool xerooyinka qaxootiga ee Giriigga, badankooduna waxay ka yimaadeen dalalka ay colaaduhu ka jiraan ee Suuriya, Ciraaq. Afghanistan.
Hay'addaha gargaarku waxay sheegayaan in ay buux dhaafeen inta badan xerooyinka qaxootiga ee dalkaas waxayna xaaladaha qaarkood ku tilmaameen "kuwo aad u xun oo aan daganayn".